Guddiga Dastuurka Baarlamaanka oo isu diyaarinaya inuu 2-da Aqal u gudbiyo war-bixin – Kalfadhi
Guddiga Dib-u-eegista Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu la wadaago Baarlamaanka Soomaaliya Cutubyada Dastuurka ee ay dib u eegeen. Guddigu waxa uu hadda diyaariyey 10 cutub oo ka mid ah 15-ka cutub ee dastuurka, kuwaas oo ay horay ugu wareejiyeen Guddiga Madaxa-banaan ee Dastuurka. “Waxaan isu diyaarinay sidii aan Baarlamaanka Soomaaliya ugu gudbin lahayn War-bixin Xiliyeedka Guddiga” ayuu yiri Xoghayaha Guddiga Dastuurka u qaabilsan Baarlamaanka Soomaaliya, Senatar Xuseen Sh. Maxamuud.
Senatar Xuseen waxa uu sheegay iney 3-dii bilba mar war-bixintaas u geeyaan Baarlamaanka, waxaana ay hadda doonayaan iney 2-da aqal la wadaagaan caqabadaha ku hor gudboon diyaarinta 5-ta cutub ee u harsan. “Caqabadaha siyaasadeed ee taagan ayaa dib inoo dhigaya maahee, mar hore ayey ahayd inaan shaqo fiican ka qabano dastuurka” ayuu Senatar Xuseen u sheegay Kalfadhi.
10-ka cutub ee ay dastuurka ka diyaariyeen ayuu sheegay iney 2 ka mid ah isku dareen (cutubyada 5-aad iyo 12-aad), oo ay ka dhigeen Cutubka 5-aad, waxaana ay taas ka dhigan tahay iney hadda Guddiga Madaxa-banaan ee Dastuurka gacanta ku haayaan 9 Cutub. Cutubyada kalee 5-ta ah ayuu Senatarku sheegay iney suurtagal tahay iney qaarkood isku daraan, oo ay soo yaraadaan cutubyada uu Dastuurka Soomaaliya ka kooban yahay.
“15-kii cutub waxay kusii socdaan 14 cutub ama wax ka sii yar, haddana waxaan rabnaa inaan qaar kale isku sii darno” ayuu yiri Xuseen Sh. Maxamuud. Waxa uu sheegay in ay guulo waa weyn ka gaareen dib u eegista ay ku hayaan dastuurka, balse ay ugu yaraan 3 bil dib uga dhaceen iney Baarlamaanka u gudbiyeen war-bixinta ay hadda diyaarimayaan, sababtana waxa uu ku sheegay qilaafyada siyaasadeed ee ay galeen Golayaasha Dowladda.